SCUF Prestige bụ ihe ọhụụ Scuf Gaming nke Xbox One | Akụkọ akụrụngwa
SCUF Prestige bụ ihe ọhụụ Scuf Gaming nke Xbox One
Ignacio Sala | | Ndi Consolas, Ngwa
Ọtụtụ bụ ndị ọrụ njikwa njikwa oge na - ahọrọ ịhọrọ njikwa na - abịa ma họrọ maka nhọrọ dị iche iche anyị nwere n’ahịa, ọ bụ ezie na ọnụahịa ha ka elu. Ozugbo ị nwara ha, ha anaghị eji serial remote ọzọ.
Otu n'ime ndị nrụpụta amaara ama na ahịa njikwa maka njikwa ndị ọzọ bụ Scuf Gaming, ụlọ ọrụ America nke bidoro SCUF ugwu a njikwa maka Xbox One dị ka PC na gam akporo ngwaọrụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata nkọwa niile nke iwu ọhụrụ a, a na m akpọku gị ka ị gụọ agụ.
Dị ka Microsoft si eme, ụfọdụ ngwaahịa ya, Scuf kwuru na ya etinyela obodo ahụ n'uche na ha mepụtara onye njikwa ọhụrụ iji gboo mkpa nke ndị egwuregwu kachasị achọ site na ịgbakwunye atụmatụ ọhụrụ nke na-eme ka ahụmịhe nke igwu egwu na njikwa dị ka Xbox One.
Otu n'ime ndị njikwa kachasị mma dị ugbu a maka Xbox bụ Xbox One Elite, onye njikwa nke Microsoft mepụtara na mmekorita ya na Scuf Gaming. Ọhụrụ ọhụụ a na-ahụ maka ime obodo na-enye anyị nkasi obi na ohere ịhazi nke anyị na-ahụtụbeghị mbụ. Ekele maka batrị lithium anyị nwere ike ịnụ ụtọ ruo 30 awa na-aga n'ihu na-enweghị ịkwụ ụgwọ ebe dị anya. Tụkwasị na nke a, ọ na-enye anyị ikpe omenala na mkpuchi mkpuchi na-adịghị amị amị.
Egwuregwu Scuf nwere a arọ nke naanị mkpụrụ osisi 262, si otú a ghọọ otu n'ime njikwa ọkụ na ahịa. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere nke inwe ike ịhazigharị uche nke ihe ndị na-akpalite na millimita yana njem nke azụ azụ iji belata oge mmeghachi omume.
Ọ na-abịa na njikwa ọystụ abụọ ọzọ, eriri USB micro-3 braid, eriri igodo electromagnetic, na igodo SCUF maka ịhazi ihe ndị na-akpata. Nwere ike ugbu a doputa Scuf Prestige site na weebụ ScufGaming.com maka euro 159,95, ọ bụ ezie na anyị ga-echere ụbọchị ole na ole iji nụ ụtọ ya, ebe ọ bụ na a ga-eziga ha n'ime ụbọchị 30 mgbe ndoputa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » SCUF Prestige bụ ihe ọhụụ Scuf Gaming nke Xbox One
Realme 3 Pro, ọnụ ya na-abịa dethrone Xiaomi [Analysis]
Eureka, ngwa okike ichoro igbanwe igodo gi, ma obu ihe yiri ya